नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारमा सुस्तता, कस्ले रोक्ने ठेकेदारको बेवास्ता ? – Mission Khabar
नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारमा सुस्तता, कस्ले रोक्ने ठेकेदारको बेवास्ता ?
मिसन खबर २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:१३
काठमाडौं चितवन । सरकारले ठूला आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन आवश्यक समन्वय गरेको वताइरहदा नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड विस्तारले गति पाउन सकेको छैन । ११३ किलोमिटर लामो नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको सडक विस्तारको काम ठेकेदार पक्षले काम नगर्दा निकै सुस्त देखिएको हो ।
गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६४.४ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज-१’ र दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज-२’ बनाएर ठेक्का लगाइएपनि दुबै खण्डको कामको गति निक्कै सुस्त छ । पूर्वी खण्डमा काम सुरु भएर गति लिन नसक्दा पश्चिम खण्डको काम नै भएको छैन । सडकको पूर्वीखण्डमा पर्ने ९ ठूला पुलमध्ये ३ वटाको काम तत्कालै अघि बढाइने भनिए पनि पुलको योजनासमेत अलपत्र बनेको छ । काम गर्ने कामदारहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर काम गराउन सकिने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले यतातर्फ रुची नदेखाएको आयोजनाको दाबी छ ।
पश्चिमी खण्डमा साना, मध्यम, ठूला पुल, कल्भर्ट गरी २ सय ७६ संरचना बनाउनुपर्नेछ । यहाँ ९ ठूला पुल बनाउने योजना छ । सडक विस्तारका क्रममा पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डमा गरी ४६ हजार २ सय ९४ रुख काट्नुपर्नेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगको लामो विवादपछि सहमति भएपनि कटानीको कामले समेत सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । दुबै खण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनको सुस्तता कायम रहे असोज, कार्तिकअघि कामले गति लिन नसक्ने सडक विस्तार आयोजना आफै बताइरहेको छ ।
२०७५ पुषमा ठेक्का सम्झौता भएर सोही बर्ष चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक बिस्तारको शिलान्यास बुटलबमा गरेका थिए । १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक विस्तारमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग गरेको छ ।